ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျမှ သငျ့ကို ဝေးကှာသှားစနေိုငျသညျ့ အခကျြမြားကို ဘယျလိုရှောငျရှားကွမလဲ
ကြှနျတျောတို့အမြားစုက ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျမြား ခမြှတျရေးဆှဲကွသျောလညျး ဒီရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျမြားကို အကောငျအထညျဖျောရနျအတှကျတော့ ခကျခဲနတေတျကွပါတယျ။ အဓိကအခကျြကတော့ စိတျဓာတျမပွတျသားတာ၊ ခံယူခကျြမပွငျးပွတာ၊ သညျးခံနိုငျစှမျး လုံလောကျမှုမရှိတာတှကွေောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမြိုးတှမေဖွဈရအောငျ ဘယျလိုအခကျြအလကျတှေ ပွငျဆငျသငျ့တယျဆိုတာကို ဆှေးနှေးတငျပွလိုပါတယျ။
(၁) တိကတြဲ့ ပနျးတိုငျ “SMART Goal” ခမြှတျပါ။
SMART ဆိုတာကတော့ Specific (တိကခြွငျး၊ သတျသတျမှတျမှတျဖွဈခွငျး)၊ Measurable (တိုငျးတာ၍ရခွငျး)၊ Attainable (ရယူနိုငျခွငျး)၊ Relevant (သကျဆိုငျမှုရှိခွငျး)၊ Time-bound (အခြိနျသတျမှတျထားခွငျး) လို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ အသေးစိတျထပျပွီးလလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
ပထမဆုံး ကိုယျ့ရဲ့ပနျးတိုငျကို ခမြှတျဖို့လိုပါတယျ။ ဒီလိုခမြှတျတဲ့နရောမှာ 5W နဲ့ ခမြှတျရအောငျ
(1) What - ဘာကို ပွီးမွောကျစခေငျြတာလညျး
(2) Why - ဘာကွောငျ့ ဒီပနျးတိုငျကို ခမြှတျရတာလညျး။
(3) Who - ဘယျသူတှကေ ပူးပေါငျးပါဝငျမှာလဲ။
(4) Where – ဒီပနျးတိုငျရဲ့ အဆုံးသတျက ဘယျနရောမှာလဲ။
(5) When - ဘယျအခြိနျမှာ ဒီပနျးတိုငျကို ရောကျရမှာလဲ . . . . . အစရှိတဲ့အခကျြတှကေို တိတိကကြ သတျမှတျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို တကယျရောကျမရောကျကို ဘယျလိုနညျးနဲ့ တိုငျးတာကွမလဲ
(1) အရအေတှကျနဲ့လား (How Much?. How Many?)။
(2) ဒါမှမဟုတျ သငျ့ပနျးတိုငျကို ဘယျလိုနညျးလမျးနဲ့ရောကျမရောကျကို သိနိုငျမလဲ (How Will . . . . ?) ဆိုတာကို အစပိုငျးထဲက တိတိကကြ သိရှိထားဖို့ လိုပါတယျ။
ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျဆိုတာ တနညျးပွောရရငျ သငျ့အတှကျ စိနျချေါမှုတဈခုပါပဲ။ ဒီရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို ရောကျရှိဖို့ရနျအတှကျ ဗဟုသုတ၊ ကြှမျးကငျြမှုရှိခွငျး အစရှိတာတှေ လိုအပျပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ ရညျမှနျးခကျြပနနျးတိုငျရောကျရှိစခွေငျးငှာ လိုအပျတဲ့ စှမျးရညျ၊ ဗဟုသုတတှေ၊ မိမိရှကေ့အောငျမွငျသှားသူတှေ ဘယျလိုကွိုးစားခဲ့သလဲ၊ ဘာတှလေလေ့ာခဲ့သလို ဆိုတာတှကေို လလေ့ာပွီး လိုအပျတာတှကေို သငျယူဖို့ လိုအပျပါတယျ။
မိမိ သိရှိနားလညျ၊ တတျကွှမျးထားတဲ့ ပညာရပျတှနေဲ့ မိမိရောကျရှိလိုတဲ့ ပနျးတိုငျက ကိုကျညီမှုရှိဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ မိမိရဲ့ပနျးတိုငျက အောငျမွငျတဲ့စာရေးဆရာ၊ တကယျတမျး လလေ့ာနတောကတော့ ဖကျရှငျဒီဇိုငျးဆိုရငျတော့ ကိုယျတကယျရောကျလိုတဲ့ ပနျးတိုငျကို ရောကျရှိနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ပနျးတိုငျတဈခုကိုခမြှတျရာမှာ အခြိနျအကနျ့အသတျမပါခဲ့ရငျ အခြီးအနှီးပါပဲ။ ဒီ့အတှကျ ကိုယျရောကျရှိရမယျလို့ သတျမှတျထားတဲ့ ပနျးတိုငျကို ဘယျအခြိနျအတှငျး ရောကျရှိအောငျ လုပျဆောငျမယျဆိုတဲ့ မိမိကိုယျမိမိ စိနျချေါတဲ့ Time-bound (အခြိနျသတျမှတျခွငျး) လှနျစှာမှ အရေးပါပါတယျ။
(၂) ဖုနျးအသုံးမြားခွငျးကို ရှောငျကဉျြပါ။
ဒီနခေ့တျေ လူငယျအတျောမြားမြားက ဖုနျးကို အကြိုးမရှိတဲ့နရောတှမှော အသုံးမြားပွီး အခြိနျတှေ ကုနျဆုံးလရှေိ့တယျ။ Social Media, Game အစရှိတာတှနေဲ့ အခြိနျတှကေုနျဆုံးနကွေပါတယျ။ မိမိရဲ့ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို တကယျရောကျခငျြတာဆိုရငျတော့ ဒီလိုမြိုး အကြိုးမဲ့အခြိနျကုနျစမေယျ့ ဖုနျးအသုံးပွုခွငျးကို ရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။ အခြိနျတခုသတျမှတျပွီး ဘယျအခြိနျမှာတော့ ဒီလိုကိစ်စရပျမြိုးတှအေတှကျအသုံးပွုမယျ၊ ကနျြအခြိနျတှမှောတော့ ကိုယျ့ရဲ့ပနျးတိုငျကို အောငျမွငျစနေိုငျမယျ့ အကြိုးရှိတဲ့ပညာရပျတှကေို လလေ့ာမယျ အစရှိသဖွငျ့ မိမိကိုယျမိမိ စီမံခနျ့ခှဲရပါလိမျ့မယျ။
အလုပျတဈခုကို စလုပျပွီးဆိုရငျ ဒီစလုပျထားတဲ့အလုပျကို အဆုံးသတျနိုငျဖို့ပဲ ကွိုးစားပါ။ ဟိုအလုပျ၊ ဒီအလုပျ အစရှိသဖွငျ့ စိတျမတညျငွိမျဘဲ လြှောကျလုပျနမေယျဆိုရငျတော့ ဘယျတဈခုမှ ပွီးမွောကျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ အလုပျကို လောဘကွီးတာ ကောငျးတယျဆိုပမေယျ့ ပွီးမွောကျခငျြတဲ့စိတျဆန်ဒအားကွီးသှားရငျတော့ အမှားဖွဈဖို့ ပိုမြားပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ မိမိစိတျကိုတညျငွိမျအောငျထားပါ။ စိတျတညျငွိမျအောငျ တရားမှတျပါ၊ စိတျလကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျပါ။ ယောဂကငျြ့ပါ။ အလုပျတဈခုပွီးမွောကျမှ နောကျတဈခုကို အကောငျအထညျဖျောပါ။
(၄) အကွောငျးရငျးကို မမပေ့ါနဲ့။
တဈခါတဈရံမှာ အခွားသောကိစ်စရပျတှကွေောငျ့ မိမိရဲ့ပနျးတိုငျကို သတိလကျလှတျဖွဈသှားတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဘာတှလေုပျနသေလဲ၊ ကိုယျ့ရဲ့ပနျးတိုငျရောကျဖို့အတှကျ သကျဆိုငျမှုရှိရဲ့လား၊ ပနျးတိုငျရောကျဖို့ ကွိုးစားနတောရော ဟုတျရဲ့လား အစရှိသဖွငျ့ မိမိကိုယျမိမိ အမွဲသတိပေးနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။
(၅) မိမိကိုယျမိမိ အမွဲတကျကွှလနျးဆနျးနပေါစေ။
ဘယျပနျးတိုငျမဆို အခကျအခဲကတော့ အနညျးနဲ့အမြား ရှိကွတာပါပဲ။ ဒီ့အတှကျ ကိုယျ့ကိုကိုယျ တှနျးအားပေးဖို့၊ ကနျြးမာဖို့၊ တကျကွှလနျးဆနျးနစေဖေို့၊ လလေ့ာသငျ့တာတှလေလေ့ာရငျး အမွဲဘဲ လနျးဆကျတကျကွှနပေါစေ။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှ သင့်ကို ဝေးကွာသွားစေနိုင်သည့် အချက်များကို ဘယ်လိုရှောင်ရှားကြမလဲ
ကျွန်တော်တို့အများစုက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ချမှတ်ရေးဆွဲကြသော်လည်း ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်တော့ ခက်ခဲနေတတ်ကြပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ စိတ်ဓာတ်မပြတ်သားတာ၊ ခံယူချက်မပြင်းပြတာ၊ သည်းခံနိုင်စွမ်း လုံလောက်မှုမရှိတာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်။
(၁) တိကျတဲ့ ပန်းတိုင် “SMART Goal” ချမှတ်ပါ။
SMART ဆိုတာကတော့ Specific (တိကျခြင်း၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ခြင်း)၊ Measurable (တိုင်းတာ၍ရခြင်း)၊ Attainable (ရယူနိုင်ခြင်း)၊ Relevant (သက်ဆိုင်မှုရှိခြင်း)၊ Time-bound (အချိန်သတ်မှတ်ထားခြင်း) လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်။
ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုချမှတ်တဲ့နေရာမှာ 5W နဲ့ ချမှတ်ရအောင်
(1) What - ဘာကို ပြီးမြောက်စေချင်တာလည်း
(2) Why - ဘာကြောင့် ဒီပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ရတာလည်း။
(3) Who - ဘယ်သူတွေက ပူးပေါင်းပါဝင်မှာလဲ။
(4) Where – ဒီပန်းတိုင်ရဲ့ အဆုံးသတ်က ဘယ်နေရာမှာလဲ။
(5) When - ဘယ်အချိန်မှာ ဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်ရမှာလဲ . . . . . အစရှိတဲ့အချက်တွေကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို တကယ်ရောက်မရောက်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တိုင်းတာကြမလဲ
(1) အရေအတွက်နဲ့လား (How Much?. How Many?)။
(2) ဒါမှမဟုတ် သင့်ပန်းတိုင်ကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ရောက်မရောက်ကို သိနိုင်မလဲ (How Will . . . . ?) ဆိုတာကို အစပိုင်းထဲက တိတိကျကျ သိရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆိုတာ တနည်းပြောရရင် သင့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက် ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း အစရှိတာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ရည်မှန်းချက်ပနန်းတိုင်ရောက်ရှိစေခြင်းငှာ လိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်၊ ဗဟုသုတတွေ၊ မိမိရှေ့ကအောင်မြင်သွားသူတွေ ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေလေ့လာခဲ့သလို ဆိုတာတွေကို လေ့လာပြီး လိုအပ်တာတွေကို သင်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မိမိ သိရှိနားလည်၊ တတ်ကြွမ်းထားတဲ့ ပညာရပ်တွေနဲ့ မိမိရောက်ရှိလိုတဲ့ ပန်းတိုင်က ကိုက်ညီမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ မိမိရဲ့ပန်းတိုင်က အောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာ၊ တကယ်တမ်း လေ့လာနေတာကတော့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဆိုရင်တော့ ကိုယ်တကယ်ရောက်လိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုချမှတ်ရာမှာ အချိန်အကန့်အသတ်မပါခဲ့ရင် အချီးအနှီးပါပဲ။ ဒီ့အတွက် ကိုယ်ရောက်ရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ဘယ်အချိန်အတွင်း ရောက်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ စိန်ခေါ်တဲ့ Time-bound (အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း) လွန်စွာမှ အရေးပါပါတယ်။
(၂) ဖုန်းအသုံးများခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်အတော်များများက ဖုန်းကို အကျိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးများပြီး အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိတယ်။ Social Media, Game အစရှိတာတွေနဲ့ အချိန်တွေကုန်ဆုံးနေကြပါတယ်။ မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို တကယ်ရောက်ချင်တာဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုး အကျိုးမဲ့အချိန်ကုန်စေမယ့် ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ အချိန်တခုသတ်မှတ်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာတော့ ဒီလိုကိစ္စရပ်မျိုးတွေအတွက်အသုံးပြုမယ်၊ ကျန်အချိန်တွေမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စေနိုင်မယ့် အကျိုးရှိတဲ့ပညာရပ်တွေကို လေ့လာမယ် အစရှိသဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ စီမံခန့်ခွဲရပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို စလုပ်ပြီးဆိုရင် ဒီစလုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကို အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားပါ။ ဟိုအလုပ်၊ ဒီအလုပ် အစရှိသဖြင့် စိတ်မတည်ငြိမ်ဘဲ လျှောက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်တစ်ခုမှ ပြီးမြောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ကို လောဘကြီးတာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ပြီးမြောက်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒအားကြီးသွားရင်တော့ အမှားဖြစ်ဖို့ ပိုများပါတယ်။ ဒီ့အတွက် မိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် တရားမှတ်ပါ၊ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပါ။ ယောဂကျင့်ပါ။ အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်မှ နောက်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
(၄) အကြောင်းရင်းကို မမေ့ပါနဲ့။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အခြားသောကိစ္စရပ်တွေကြောင့် မိမိရဲ့ပန်းတိုင်ကို သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေသလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်မှုရှိရဲ့လား၊ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာရော ဟုတ်ရဲ့လား အစရှိသဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ အမြဲသတိပေးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၅) မိမိကိုယ်မိမိ အမြဲတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါစေ။
ဘယ်ပန်းတိုင်မဆို အခက်အခဲကတော့ အနည်းနဲ့အများ ရှိကြတာပါပဲ။ ဒီ့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွန်းအားပေးဖို့၊ ကျန်းမာဖို့၊ တက်ကြွလန်းဆန်းနေစေဖို့၊ လေ့လာသင့်တာတွေလေ့လာရင်း အမြဲဘဲ လန်းဆက်တက်ကြွနေပါစေ။
Read times Last modified on Wednesday, 15 July 2020 15:31